Usoro - Delta Engineering Belgium
Banye na otu "Usoro"
Tọzdee, 23 June 2020 by Sara
Mkpokọta data di omimi
Ihe omimi data anyi di omimi bu PC nke choro data niile site na ahihia. Nwere ike ịmalite / kwụsị igwe, jụọ ike oriri, akara arụmọrụ, yana ọtụtụ ihe iji melite arụmọrụ gị. Na-eme data dị na SQL, MYSQL, wdg maka ịkọ akụkọ.
Akpadoro n'okpuru: akara dị mma
Ngwa Dọkịta Ihe Dike
Ngwa Dijitalụ Ndị Mkpokọ data a na - ewere data dị iche iche na - anakọta data dị na ahịrị. Mgbe ahụ, ọ na-echekwa ma dochie data ahụ obere oge. Data nke njikwa akara gụnyere nha nke arụmọrụ nke ike, ike oriri, wdg.
Igwe mmiri ahụ na-ewepụta ikuku dị ikuku site na gburugburu ebe ị na-emepụta. Ọ na - eji mmiri eji ebu ka ọ dị jụụ ikuku, na - ebelata igirigi. Nke a na - egbochi ikpu ahihia na ero / igwe gị.
Ihe njikwa akara
Ndị na-achịkwa akara na-ekwe ka nlekọta nke usoro & ọrụ nke igwe & ahịrị mmepụta. Njikwa eruba nke karama, ikwu n'ụzọ… N'ihi na elu akara arụmọrụ!